Abazalwane abancane Belfast FSX & P3D izinkinga
Umbuzo Abazalwane abancane Belfast FSX & P3D izinkinga
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #837 by Dariussssss
Ngamafuphi, i-AP ayisebenzi ngokugcwele. Ukuphakama, ukuhamba nokusheshisa kulungile, kodwa akulandeli umzila we-GPS nhlobo. Konke okunye kubonakala kuhle, indiza enhle.
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #838 by Gh0stRider203
ingabe uyibeke kumodi ye-GPS? I-LOL Idk yiziphi izinkinobho ozitholile ukuze kube khona uma kungenakho ushintsho kodwa kuMayini, yi-Ctrl Shift N
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #839 by Dariussssss
Hey Gh0st, yini ephakanyisiwe?
Ingabe konke kulungile. Ku-AP it ngokwakho, kungu-switch, ngakho-ke, ngeke kube lula kunalokho.
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #840 by Gh0stRider203
kahle, khona-ke umlilo makaniki wakho lol
ngenyanga ngonyaka 1 1 edlule #841 by Dariussssss
Haha .... funny kakhulu.
Lol..yeah, leyo nsizwa cishe yayiphakeme ngenkathi ishayela i-AP ....
11 izinyanga 1 iviki edlule #938 by DRCW
Hlola ifayela le-CFG engxenyeni ye-autopilot, uma ungenakuthola inkinga lapho, zama ukufaka enye i-autopilot CFG yezindiza, noma ufaka ukushintshwa kwe-Nav / GPS kusuka kwenye indiza njenge-2D ephakanyisiwe bese uyengeza kuyo ifolda yephaneli
Isikhathi ukudala page: 0.152 imizuzwana